« Misora-tena toa voatango » -
AccueilTresaka« Misora-tena toa voatango »
02/01/2019 admintriatra Tresaka 0
Iaraha-mahalala fa mbola vokatra vonjimaika ihany no navoakan’ny CENI raha fifidianana no resahina. Izany hoe tsy mbola misy kandidà afaka misora-tena ho efa lany taorian’iny vokatra vonjimaika iny. Aorian’ny vokatra ofisialy havoakan’ny HCC mantsy vao fantatra izay ho filoham-pirenena hitantana an’i Madagasikara, ary tokony samy hiandry ny famoahana io vokatra ofisialy io avokoa ireo mpifaninana.
Tsy izany anefa no miseho ankehitriny fa misy kandidà tsy mahandry ny famoahan’ny HCC io vokatra ofisialy io, ka toa mihevi-tena ho efa lany sahady. Tsy iza izany fa ry Andry Rajoelina sy ny firongony. Raha tarafina tamin’ny fihetsiketsehana rehetra nandritra iny faran’ny taona, sy ny fandraisana ny taona vaovao dia toa ireny efa lany ireny mihitsy ity kandidà ity. Tena toa ireny mpaminany ireny mihitsy.
Asa na tsy tsapan’i Andry Rajoelina, na hodian-tsy hita ireo fitoriana marobe momba azy, noho ny hala-bato nataony sy ireo mpanohana azy nandritra iny fifidianana iny. Tsy tokony hohadinoina fa hisy fiantraikany mivantana amin’ny famoahan’ny HCC ny vokatra ireny tranga mamohehitra marobe ireny. Izany hoe raha nandresy ianao tamin’ny namoahana ny vokatra vonjimaika, dia mety hifanohitra amin’izany ny zavatra hitranga amin’ny famoahana ny vokatra ofisialy.
Raha izay tokoa moa no hiseho, hanao ahoana no fihetsik’ity Kandidà efa mirehareha etsy sy eroa ity? Toa efa tsinjo sahady fa vao mainka hamohehitra sy tsy fampiseho masoandro ny ataony. Tsy azo hodiana tsy hita mantsy ny nataon’ny MAPAR teny amin’ny CENI andro vitsy nialohan’ny namoahan’ity farany ny vokatra vonjimaika ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany. Nilaza ho nanaiky ny fomba fiasan’ity rafitra mpikarakara ny fifidianana ity izy ireo, ary nivadika tampoka taorian’ny nahafantarany fa tsy lany “premier tour”. Dia samy hotsarain’ny tantara eto isika mianakavy izany. Tsy azo hodian-tsy hita ihany koa mantsy ireo vahoaka maro etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai, izay mitaky ny mangarahara tamin’iny fifidianana farany iny.
Nitrangana hain-trano mahatsiravina indray teny mahavoky, omaly hariva tokony ho tamin’ny 07 ora tany ho any. Trano hazo tsy latsaky ny 80 tafo no indray lasa lavenona vokatr’izany. Ankoatra ireo trano hazo ireo, dia nisy ...Tohiny